Gabar Jaceyl Beerka Looga Soo Riday Oo Aqristayaasha Shums Talo Ka Dooneysa , Bakhiil Ha Noqon - Galmada.net
Hiddo Waaa gabar soomaaliyeed kana mid ah dhalin yarada haatan so hana qaadey kuna nool qurbaha waxa aay aheed markii ugu horeeysey oo aay jaclaato wiil soomaaliyeed waxuuna ahaa jaceyl ugub ah aadna u tayeeysan had iyo jeerna lahaa farxad iyo damaashaad midba mid kale aad buu ugu qanacsanaa una jeclaa.
Hiddo ayada ayuu ku hormarey jaceylka oo sida aay inoo sheegtey waxa aay la kulantey wiil soomaaliyeed oo aay ku tilmaamtey qorax soo baxeeyso iyo qaansadii rooobaadka, waxa aya inoo sheegtey inuu ahaa axad ku hodan ahaa dabeecad iyo waliba dulqaad, waxa aayna raacisey waxuu ahaa wiil dabooli karey dhamaan xumaanta wiilasha kale ee soomaaliyeed,ayadoo ugu danbeeyntiina ku soo hadal koobtey dhabtii waa jeclaa.
Hadaba sida aay hido inoo sheegtey waxa aay bandhigatay jaceylkeedii ugubka ahaa oo aay u qaadey wiilkaa soomaaliyeed ayadoo u haraad qabtey in uu codsigeeda iyo araajigeeda aqbalo si aay u libin gaadho u hesho una hanato wiilka aay sidaa iyo si kasii badanba u amaantey,tallow maxuu ugu jawaabi doonaa codsigeeda.?
Wiilkii oo loo marey wadooyin fara badan sidii loo soo xero galin lahaa loogana dhaadhacsiin lahaa jaceylka loo qabo ugu danbeytii waa lagu guuleeystey oo waxa uu ahaa shaqsi aqbalay codsigii hido oo waliba kal iyo laab gacma iyo gacma furan kusoo dhaweeyey,taasina waxa aay run ka dhigtey jaceylki ugubka aha ee hodan.
Shaki kuma jiro in qof kasta oo inaga mid ahi garan karo qiimaha iyo macaanida uu leeyahay jaceyl taaba galay laguna guuleeystay helitaankiisa sidaa darteed hido iyo wiilkii waxaa u bilaawdey nolol aan lagu soo koobi Karin qoraal iyo qormo,kaba soo qabo in aay noqdeen lamaahana aduunka ugu sareey ee is jecel.
Waqtigu waxuu ahaa mid leh leydh caafimaad iyo saxan saxo udgoon oo qof kastaahi heli Karin ilaa iyo hido iyo jaceylkeeda mooyaane,qofba qofka kale waxuu ku muteeystey kalsooni iyo waliba kasbasho aan horey loo arag oo waxaa la isla gaarey heer iyo waqti la,iskugu yeero midba midka kale magaciisi qaato oo waxaaba dhacdo in mid hadii la waayo la waydiin jirey midka kale halka laga heli ama uu haatan jiri karo.
Aqristoow waad dareemi kartaa in qisadaanu aheed mid horaanteedii loo dhidiba aasey daacad iyo wada jir midnimo iyo meel kuwada noolaansho ee ma is weydiisey sababta laguu yidhi walaal ila tali & abaayo Ii tali.
Hido:Waa Maalin aanan ku farxin hadalkii gacaliyaheeyga oo waxa uu iisheegey inuu iga tagi rabo asagoo ka guuri rabo halkii iyo xaafadii aan ku wada nooleeyn asagoo aadi doono mid ka mid ah magaalooyinka kale ee wadanka ana ku wada nooleeyn,runtii hadalkaasi aad buu dhaawacay oo waxaan dareemey bee tiri hido dabeyl iyo duufaano kaligeey iwado hadana waxaan ku qancey hadalkiisa oo ahaa inuu mar kasta iyo meel walbaba isoo booqan doono marnaba uusan iga maqnaan doonin asagoo iisheegey sababta uu iiga tagayana aay aheed inuu sii kororsado aqoontiisa si mustaqbalkeena uusan u noqon mid diif iyo daal dhax maquurta.
Markii uu iga tagey ma aanan dareemin cidlo oo had iyo jeer waanu wada hadli jirney wada xariiri jiney mar kastana iska war hayn jirney in kastoo aanu heli jirin muuqaalkiisa hadana waxaan ahaa mid ku qanacsan. Hadaba maxaa kale oo soo kordhi doona marba hadii sidaan lagu kale qanacsan yahay waa su,aale sxb.?
Wiilkii waxa u socdey bey tiri hido dacwo dhankaa iyo yurub ah taas oo maalin maalmaha ka mid ah u soo baxdey oo la soo siiyey Visaha ama dal ku galkii,wuu isoo wacay oo ii sheegey aad iyo aad baanan uga naxay hadalka kasoo yeerey maxaa yeeley marnaba ma aanan dooneeyn inuu bebe geeyga iga fogaado waan ka naxay runtii aad oo weyn,waxuuna ii sheegey inuu ii imaano doono oo aan wax isla wada meel dhigi doono. Wuu ii yimid oo aan wada fariisanay kana munaaqishooney maxaa inoo xal ah maadaama aan kale hayaami doono qofba qofka kale aad buu u dhiira galinayey aad buuna uga xumaa in la kale tago maanta oo kale.!!
Wiilii waxa uu ku yidhi hido: macaanto waxaan rabaa inaan is mahersano oo aan adiga oo xaaskeeyga ah halkaan ka tago sidaana aan nolosha usii anba qaadno hadii aan wada nool nahay oo kaama tagi karo adiga oo aan marwadeeyda aheyn ee bal ka waran arinkaa side baad u aragtaa kalsooni intaa la,ek bey beeri karta.
Hido waxa aya tiri: waan ka naxay oo hadalkaa waxuu igu noqdey mid kadis ah waxaana awoodi waayey in aan wax jawaaba oo deg deg ah ka baxiyo dhowr daqiiqo ayaan aamusnaa markaa baa ku iri aboowe soo ma fiicna inaad isiiso waqti aan ku soo fakaro si aan go,aanka ugu deg degin adoo raali ahaanayo macaane.
Wiilkii wax shaki ama is badal ah kuma ridin hadalkaa ee waxa uu igu yidhi waayahay abayo waan kusugi doonaa ilaa aad isoo jawaab celiso insha allah sidaa baana lag kale tagey oo qofba qofka kale macsalameyey.
Hido taladii ayey jid u weeysey oo tin ilaa iyo cirib waxaa hareyey dhidid iyo gariir waa su,aal aad ula cuslaatey oo aaysan awood u laheyn in aay jawaab ka baxiso bal dadka hala kaashato kaga aqoonta badan arimahaan,waxa aay la sheeko wadaagtey arinteedina u bandhigatay gabar saaxiibteed ah si aya bal uga caawiso waxii jawaab ah oo aay ku dhaanto ama aay meel marin karto culeeyskan ka tan batey hido.!!
Gabadhii Saaxiibta:Waxa aay usheegtey in xili wanaagsan loo soo bandhigey arinkaan ayadoo aad iyo aad ugu amaantey sida kalsoonida leh ee saaxiibteed hido ula soo socodsiisey marxalada aay ku sugan tahay waxa aayna intaa ku dartey in ay ka
qaadan doonto kaalintii looga baahnaa ee hadaba maxeey tiri tallow.?
Saaxiibtii waxa aay hido u sheegtey in aaysan dhag jalaq usiin hadalka wiilka ayadoo intaa u raacisey in wiilkani uu yahay shabeel naagood ayadoo gaashaanka u daruurtey inuu mar kasta iyo meel walba uu joogaba yahay shaqsi ku cadow ah hablaha soomaaliyeed doonayana inuu lumiyo ama bur buriyo mustaqbal kaada sidaa darteed hido waxaad wanaagsan inaad haatan ka baxdo badaan oo aadan lumin noloshaada sxb.
Ma runbaa hadalka lagu sheegayo wiilka maxaa aqoon ah oo ka dhaxeey wiilka iyo hido saaxiibkeeda/?
Waxaa jiro dad beenta aad ugu taqasusey oo gaarey heerka aay maanta saaxiibtaani mareeyso waayo waxa aay xakuntey oo aad u xumeeysey shaqsi aaysan ebed la kulmin in looga sheekeeyo mooyaane mana jirin noloshooda kulan dhax marey iskaba daa barasho iyo waxii la hal maale waxa aayna qeyb ka tahay dadyow fara badan oo usii majo xeeytey sidii aay u kale bur burin lahaayeen lamanayasha soomaaliyeed farxadooda.
Bal aan hido su,aalo maxaa uga baxay hadalkii saaxiibteed mase meel marin doontaa talada saaxiibadeed.?
Hiddo: Haa waa meel mariyey oo saaxiibteey aad baan u aaminsanaa uguna kalsoonaa hadalkeedana hadal ma dul dhigi jirin waayo waxaan ahaa saaxiib u ah daacad wanaag iyo waxtarkeedana jecel balse ayadu waxa aay aheed mici qaraar badan oo meel kasta dadka ka mudaayo hadalkeedi baan qaatey oo wiilkeii sxbkeey ahaa waxaan ku iri waxa aad isoo bandhigtey uma ahi diyaari waxaana tahay qayaanooole ee horteyda dhaaf.
Wiilkii oo aad ula murugoon jawaabta gacalisadiisa ayaa iska safrey oo ka haajirey qaarada Africa halka hido iyo saaxiibteedna dhoolaha ka qoslayeen maadaama aay libin laheen sida aay markaa aaminsanaayeen balse maxaa xigi doono maanta ama bari,mudo intaa la,ek ayaa lagu jiri doonaa farxadaan iyo reyn reyntaan.?
Hido maalmo kooban ka dib waxa aay ogaatey in wax kasta oo loo sheegayey ahaayeen been iyo bar kuma taal waxaana si bareer ah loogu sheegey in la doonayey in laga bur buriyo farxada iyo noloshaaan isku dheeli tiran oo aay dhax maquuraneeyso,lagana guul gaarey ajandaheedi iyo waliba olo oloheedi lagana guleystey.
Waxaa ku furmey albaabo murugo ah waxaana ku yaraadey hawada waxaan cariiri ku noqdey dhulka baaxada weyn ee rabi sameeyey waa kaligeed iyo murugo aduun,ma garan karto meel aay kala xariirto wiilki aay sida oodhan u xumeeysey mana awoodo in aay adkeeysato oo waa qof nabsi aruursey aduunyadu xuma.
Hido isbuucyo murugo iyo xanuun badnaa kadib waxaa nasiib wanaag loo soo heley meel lagala xariri karo wiilkii sida adareskiisa waxaana loo sheegey iney aay u talaaabo qaado sidii aay wax uga dhaadhacsiin laheed wiilka maadama aay aheed qofka qaladka sameeyey,shaki kuma jiro in aay haatan wax kasta diyaar u tahay balse waxaan la hubin wiilkii iyo waxa uu dhahi doono ama ku jawaabi doono qofba maalinki ayuu baxin doonaa jawaabta ee bal maantana aan ka dhageeysano jawaabta wiilka eek u aadan in dib la,iskugu so labto.
Wiilkii: waxa uu hido usheegey in guursadey markii uu ka quustey waxa la yiraahdo jaceyl sababtuna aay aheed dhibkii aay u geeysatay iyo xanuunkii aay badey,asagoo u sheegey in hido aaysan soo wacin wax fariin ahna usoo dirin oo aaysan gurigiisa aduun bur burin,waxuu intaa u raaciyey inuu heley qof ka masaxdey dhibkii iyo xanuunkii dhamantii uguna badashay dheef iyo dhoolo cadeeysey aadna u jecel yahay xaaskiisa.
Hido oo aaysan u furneen wax jawaab ah ayaa qadka ka baxdey oo mar kale tiiraanyo iyo taah afka furatay aqristoow dulucda sheekada waxa aay tahay in hido wali wiilkii jeceshahay oo aaysan ka maarmi Karin waxaadna ujeedaa hadalka wiilka oo ah inuu ka maarmey jaceyl iyo hidaba sidaa darteed maxaa talaabo ah oo aad kula talin laheed walaashaada hido ? u fiiri dhanka wanaagsan oo walala caawi walaasha hiddo.?
Jawaabtaada waa muhiim sida ugu macquulsan adigoo had iyo jeer ka eegaayo dhanka wanaagsan iyo tubta toosan xal waarana u keeni doona walaasheen soomaaliyeed hadii rabi ka raali noqdana waxaan sugnaaba waa jawaabtaada qiimaha badan.intii ka horeeysana waa saaxiibkiin “WaaSuge” Oo Idin Leh Nabaadiino.
ila Tali: Waxaan rabaa furiin, sabtoo ah sidii hore ma ii jeclo, naago kale ayuuna raadsadaa